I-Google SERP CTR ngenqanaba
NgoMvulo, Julayi 25, 2011 NgoMvulo, Juni 10, 2013 Douglas Karr
Ithini inqanaba lokucofa kwinqanaba lokujonga (CTR) kwiziphumo zezinto eziphilayo zase-US zezikhundla # 1-10 kwiPhepha leeNjini zoPhando (SERP)? I-Slingshot SEO yenze i uhlalutyo olunzulu apho idatha yaveliswa kusetyenziswa ngaphezulu kwe-170,000 yokundwendwela kwabasebenzisi kuyo yonke i-324 Zizinzile zibekwe kumagama aphambili kwisithuba seenyanga ezi-6. Ngokusekwe kwidatha, iSlingshot SEO iqaphele le curve ilandelayo ye-CTR ngqo.
Ndihlala ndibona iinkampani ze-SEO zibhengeza 'iphepha 1' kwiziphumo zabaxumi bazo. Ukuba usithathela ingqalelo isifundo, kufana nokuthembisa abathengi ngexabiso lokucofa eli-1%. Ngaba kuyachukumisa ngokwenene oko? Iya kubonisa ukuba utyalomali kwinkampani enokukuqhubela kwindawo yenombolo 1 kufanelekile ukuba utyalomali xa umthamo wokukhangela ukho ukuxhasa ishishini lakho. Esi sisifundo esingakholelekiyo.
Olunye uphononongo lofundo lwabo kukuba amaxabiso abo okucofa akaphantsi kwezifundo zangaphambili. Ngelixa benza iakhawunti yale dathasethi, ndingongeza ukuba ndiyakholelwa ukuba ingxelo kaGoogle enegama eliphambili elichaziweyo ayichanekanga. Omnye umzekelo ligama: ngubani obuye wandiphinda. UGoogle ubonelela ngevolumu yokukhangela ye-1900 yokukhangela kodwa ii-Webmasters zibonisa umthamo we-1,300 ngenyanga. Umahluko omkhulu phakathi kwala manani mabini. Kubangela ukudideka okuninzi kunye nabaxumi bethu xa bekwisikhundla esiphezulu kodwa bengafumani eyona traffic ityetyiswa nguGoogle ukuba ikhona!
Zikhuphelele le Whitepaper.
Agasti 12, 2011 kwi-10: 04 AM
Ndivile kubantu abaninzi ukuba i-google ibonisa umphumo ongachanekanga kodwa akukho namnye kuthi ongazange azame nokuba kutheni le nto isenzeka kwaye yintoni esicinga ukuba ilungile okanye ayilunganga. KuGoogle wokwenyani ubonisa iziphumo ezingachanekanga okanye asilungile. Kuba kukhuphiswano lokufumana irenki ephezulu kunye netrafikhi silahlekelwe ngumgangatho kunye nobuninzi. Ke oku kwenzeka ngenxa yayo okanye iGoogle ayilunganga. Ngoku kufuneka sifumane esona sizathu sisemva kwesi sizathu.
inkonzo yokwakha ikhonkco ikhonkco
Meyi 26, 2012 kwi-5: 31 AM
lilonke, oku kwenza kuphela 52.34%, apho abanye ucofa baye bahamba? Adwords okanye ????
Meyi 27, 2012 kwi-8: 43 PM
@twitter-90853096:disqus Ngokwenene sibhale iposti entsha enokuthi ibonelele… Uhlobo lwezinto eziphilayo ibonisa ukuba uninzi lotyelelo lwethu oluvela kwiinjini zokukhangela luvela kumangeno e-SERP anzulu kakhulu kunale. Ngelixa inqanaba #1 lilungile, lilungile kuphela ukuba libaluleke kakhulu kwiimveliso kunye neenkonzo ozinyusayo.